ဆရာကြီးကို ရွှေ့ပြောင်းပါ။, ဦး နှောက်ပဟေ.ိ – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
ဆရာကြီးကို ရွှေ့ပြောင်းပါ။, ဦး နှောက်ပဟေ.ိ – လှိုင်သာယာ&Hack
ပစ္စည်းတွေ ဖယ်ရမယ်ဆိုတာ သိလား။? တစ်ပိုင်းကို ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာ သိလား။ – ပဟေဠိဂိမ်းများတွင် အစားထိုးနည်း သင်သိပါသလား။? displace puzzle ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကြပါစို့ – ဖယ်လိုက်ရုံဖြင့် လိမ္မာပါးနပ်မှုများစွာကို ခံစားနိုင်ရန် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ရွှေ့ပြောင်းပါ။. ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဂိမ်းသည် သင့်အား ပြုံးရွှင်စေပါသည်။, သင့်ကို အပန်းဖြေရန် ကူညီပေးသည်။, သူငယ်ချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။, စကားမစပ်, ၎င်းကိုဂိမ်းအတွင်းအစားထိုးရန်. ရွှေ့ပြောင်းရုံပါပဲ။, အထက်ဖော်ပြပါ အားလုံးကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။.
displace puzzle ကစားနည်း: အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ရွှေ့ပါ။?
အင်း, အစပိုင်းမှာတော့ မခက်ပါဘူး။: ပုံတစ်ဝက်ကို ကြိုယူပါ။. အဲဒါက ဘာလဲဆိုတာ အဖြေရှာပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာ လိုင်းတွေကို ရွှေ့ဖို့ လိုပါတယ်။. ဒါပေမယ့် ဒီမှာဖမ်းတယ်။: ၎င်းကို အပြီးသတ်ရန် သင်သည် စာကြောင်းတစ်ကြောင်းသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။! ကိုင်တွယ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။?
ရွှေ့ပြောင်းဂိမ်း၏ထူးခြားချက် – တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း displace သည် သင် ရွေ့ပြောင်းသည့် ပုံသဏ္ဍာန်များကို ခန့်မှန်းရန်နှင့် လိုင်းများကို ရွှေ့ရန် AI ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။. စဉ်းစားပြီး အဖြေတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ဖယ်လိုက်ပါ။.
ကွက်လပ်ဖြည့်ခြင်းသည် အလွန်ပျော်စရာကောင်းကြောင်း မည်သူသိသနည်း။?
ထူးခြားသောဂိမ်းကစားခြင်းသည် သင့်အား ယုတ္တိဗေဒပဟေဠိဂိမ်းများနှင့် အစားထိုးဂိမ်းများ၏ လိမ္မာပါးနပ်သောပေါင်းစပ်မှုကို ယူဆောင်လာစေသည်။
အရွယ်တိုင်းအတွက် ပျော်စရာနှင့် ပညာရေး- မတူညီသော ပဟေဠိများဖြင့် သင်၏ ယေဘုယျအမြင်ကို ချဲ့ထွင်ပါ။.
ချောမွေ့ပြီး စွဲလမ်းစေသော ကစားနည်း
သင့်လက်ချောင်းသည် ခဲတံဖြစ်သည်။- ဖြေရှင်းချက်ရွှေ့ပါ။
မထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ ဟာသပုံတွေက သင့်တစ်နေ့တာကို ပုံဖော်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ပဟေဠိဂိမ်းပုံစံကို ရွှေ့ခြင်းသည် သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။
တန်ဖိုးရှိပုံ 1000 စကားလုံးများ
အမှန်တကယ်စိန်ခေါ်ပြီး တစ်ဖက်သတ်တွေးခေါ်မှုကို ဆုပေးမည့် မူရင်းနှင့် ဖျော်ဖြေမှုရှိသော ပဟေဋ္ဌိဖြေရှင်းသည့်ဂိမ်းကို ရှာဖွေနေသော်လည်း စိတ်ပျက်စွာဖြင့် သင့်ဖုန်းကို အခန်းအနှံ့ ပစ်ချမည်မဟုတ်ပါ။? အပိုင်းတစ်ခုကို ဖယ်လိုက်ခြင်းက သင့်ဦးနှောက်ကို ကွေးစေပါလိမ့်မယ်။, သင်၏ရွှေ့ပြောင်းခြင်းစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ပါ။, ပြီးတော့ မင်းကို လုံးဝရူးသွပ်သွားအောင် မမောင်းဘဲ မင်းရဲ့ ယုတ္တိဗေဒကို တကယ့်လေ့ကျင့်ခန်း ပေးလိုက်ပါ။.
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): ဦး နှောက်, မင်္ဂလာပါ, Displace, သခင်, ပဟေ.ိ
← Spider Rope Hero: City Battle Cheats&Hack ကြိုးဆွဲ – လှိုင်သာယာ&Hack →